Ixesha elidlulileyo Inkcazo eqhubekayo epheleleyo kunye nemizekelo
Ukwakhiwa kwesenzi (okwakhiwe ngokuba ngumnikelo wenxaxheba ) okhomba umsebenzi okanye imeko eqhubekayo ngaphambili. Kwakhona kwaziwa ngokuba yimpumelelo ehamba phambili .
"Wayeyazi ukuba wayephupha ngalobo busuku kwaye wayesazi ukuba amaphupha akhe ayenjani."
(W. Somerset Maugham, iholide yeKrisimesi , 1939)
"Ngeyure le ndoda endala yayibonile amabala amnyama phambi kwamehlo akhe kwaye isithukuthezi sidumise amehlo akhe kwaye isetyenziswe isinqabileyo phezu kweso kunye nasebunzini."
(Ernest Hemingway, Umdala kunye noLwandle , 1952)
"Ukuba wayezenzele , wayezifihla ixesha elifanelekileyo ngaphambi kokuba aphume aze axele ibali lakhe."
(CS Lewis, The Lion, Witch kunye neWardrobe , 1950)
"Ndandiziva ngathi ndiyindoda eqhelekileyo." Ndandineminyaka emihlanu okanye ezintandathu kuphela kwaye ndandiba nobomi bonke ezandleni zam. Nangona ndibe ndiqhuba ukuhamba kwelanga, andizange ndive nongcono. "
"Imihlathi yawa, iindlebe zagxuma ngakumbi , wayebukeka njengentlanzi efile. Ngoku wayebukeka njengentlanzi efile, omnye wonyaka odlulileyo, waphonywa kwelinye elwandle elunxwemeni kwaye washiya apho ngenceba yomoya kunye namanxuwa . "
"Ndandineminyaka elishumi elinesibhozo ubudala nangaphezulu, kwaye ndandingakenzanga nantoni na oo-Grandfather ayefuna ukuba ndiyenze, kodwa bebancedisa ."
(John G. Neihardt, u- Black Elk Uthetha , 1932)
"UMnu. Churchill ubengcono kunokuba kulindeleke; kwaye ukususwa kwawo kokuqala, ekuhambeni komngcwabo weYorkshire, kwakuya kuba yindoda endala kakhulu eWindsor, lowo uMnu. Churchill wayethembisa ukutyelela minyaka elishumi edlulileyo. "
(Jane Austen, Emma )
"Ukuhamba phambili okugqibeleleyo ( bekuye + -ing ) kusitshela ngobude bezenzo kunye nenqaku elithile xa liphela. Lwenzeka rhoqo rhoqo ukususela okanye ukucacisa ubude bezenzo."
(Ann Raimes, UkuHlola ngokuBhala . ICambridge University Press, 1998)
Eyaziwayo Njengaye: ehamba phambili epheleleyo
I-Paronomasia: Inkcazo kunye nemizekelo
I-Hammerstone: Isixhobo esilula kunazo zonke kunye nesidala kunazo zonke
I-Free Dictionary ye-Occupations and Trades